SCUM: inoshamisa kupona vhidhiyo mutambo unouya kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
SCUM: iyo inotyisa kupona yevhidhiyo mutambo unouya kuLinux
ari kupona mitambo yemavhidhiyo Ivo vaisave vasipo chinguva chakapfuura uye ikozvino ivo vanokura pasi pematombo Zvinotaridza kuti iri mhando iri kufarira zvikuru. SCUM Iri zita rechikamu ichi, asi hachisi chimwezve. Mamwe maratifomu anoita kuti ive yakasiyana uye inonakidza kwazvo. Iwe unongofanirwa kuona iwo magiraidhi aine chaiyo chaiyo chaiyo chaiyo. Zvakare, iyo nyaya iri seri kwemutambo uyu zvakare iri yechokwadi uye kwete iyo yakajairika iyo vamwe vanayo.
Kana iwe uchida rumwe ruzivo nezve SCUM, unogona kuwana iro peji mu Valve Steam, chitoro umo chichatengeswa. Basa guru reGampires, Croteam uye Devolver Dhijitari raita kuti chisikwa ichi chive chinogoneka uye vakasimbisa kuti vane zvirongwa zvekuzviunza kuLinux zvakare. Saka vese maLinux gamers vachakwanisa kuanakidzwa.
Para kukwanisa kuimhanya zvisina mutsindo uye mushe, zvinopfuura zvakafanira zvemhando yepamusoro zvinozodiwa. Kunyangwe hunhu hunodiwa muGNU / Linux husati hwabuda, saka unogona kuoneka muWindows inoda Intel Core i5-6000K processor kana AMD Ryzen 5 1600. Zvakare yakakurudzirwa 8 GB RAM, kunyangwe iine 4 GB futi. zvaizoshanda. Kana zviri zvemifananidzo, ivo vanoda iyo NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB kana AMD Radeon RX 580 4 GB. Iyo iripo nzvimbo iri 30 GB uye kana iwe uchida kutamba mune vakawanda vatambi zvakare kubatana kune iyo network.
Panguva ino, kuti tione mhedzisiro yeLinux isu tinofanirwa kumirira. Hapana zuva rekuburitsa kubva pachiteshi, asi chokwadi haisi kure zvakanyanya. Asi isu tinotarisira mhedzisiro huru, iyo isina kufanana neRust uye Mazuva manomwe Ekufa, haina simba rakasimba pakusimbisa hunhu, kutonga, uye kufambira mberi. Mune ino kesi iwe une yakajairwa nzira yekupona, uye zvakare Deathmatch, Team Deathmatch modes, nezvimwe, nehutsinye chaihwo. Unogona kuchovha mumotokari, kuvhima, kuteedzera, uye zvimwe zvakawanda ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » SCUM: iyo inotyisa kupona yevhidhiyo mutambo unouya kuLinux
SUSE Linux Enterprise 15 SP1 ikozvino yave kuwanikwa uye idzi ndidzo nhau dzayo